“Hisaorana anie [ilay] Andriamanitry ny fampiononana rehetra! Mampionona antsika amin’ny fahoriantsika rehetra izy.”—2 KOR. 1:3, 4.
HIRA: 33, 41
Nahoana no efa ampoizintsika hoe hisy olana eo amin’ny mpivady na ny fianakaviana?
Inona no vokany rehefa nivavaka ny olona sasany resahin’ny Baiboly?
Inona no azonao atao mba hampaherezana ny hafa?
1, 2. Ahoana no ampaherezan’i Jehovah antsika rehefa manana olana isika, ary inona no ampanantenainy ao amin’ny Teniny?
HOY ny 1 Korintianina 7:28: ‘Hanam-pahoriana amin’ny nofony ireo hanambady.’ Nisaintsaina an’izany ny tovolahy iray, dia nanontany anti-panahy iray efa manambady hoe: “Inona ilay ‘fahoriana’, dia ahoana no hiatrehako an’izany rehefa manambady aho?” Tsy tonga dia namaly ny fanontaniany ilay anti-panahy, fa nasainy nieritreritra zavatra hafa noresahin’ny apostoly Paoly aloha izy. Tsy inona izany fa ilay hoe “Andriamanitry ny fampiononana rehetra” i Jehovah, ary “mampionona antsika amin’ny fahoriantsika rehetra izy.”—2 Kor. 1:3, 4.
2 Tena tia antsika i Jehovah Raintsika, ary mampahery antsika izy rehefa miatrika zava-tsarotra isika. Angamba ianao mahatadidy hoe efa nanampy anao sy nanome tari-dalana anao izy, ary matetika tamin’ny alalan’ny Teniny no nanaovany izany. Matokia fa mitady izay tena hahasoa antsika izy, toy ny efa nataony tamin’ny mpanompony taloha.—Vakio ny Jeremia 29:11, 12.
3. Inona avy no hodinihintsika ato?
3 Mora kokoa amintsika matetika ny miatrika olana na fahoriana rehefa fantatsika ny anton’ilay izy. Hoatr’izany koa ny olana eo amin’ny mpivady na ny fianakaviana. Horesahintsika ato àry hoe inona no mety ho anton’ilay ‘fahoriana amin’ny nofo’ noresahin’i Paoly. Handinika ohatra fahiny sy amin’izao andro izao koa isika, mba hahafantarantsika hoe inona no afaka mampahery antsika. Hanampy antsika hiatrika olana izany.
INONA ILAY ‘FAHORIANA AMIN’NY NOFO’?
4, 5. Inona avy ny ‘fahoriana amin’ny nofo’ mety hanjo ny mpivady?
4 Rehefa avy namorona an’i Eva i Jehovah, dia nentiny tany amin’i Adama izy ka lasa vadiny. Hoy i Jehovah avy eo: “Ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy ireo.” (Gen. 2:24) I Jehovah àry no namorona ny fanambadiana. Tsy lavorary daholo anefa isika, ka azo antoka hoe hanana olana izay manorin-tokantrano. (Rom. 3:23) Tsy ny ray aman-dreniny intsony, ohatra, no mila ankatoavin’ilay vehivavy, fa ny vadiny. Ny lehilahy mantsy no notendren’Andriamanitra ho loham-pianakaviana. (1 Kor. 11:3) Mety ho sarotra amin’ilay lehilahy amin’ny voalohany ny hanome toromarika ny vadiny. Mety tsy ho mora amin’ilay vadiny koa ny hoe hanaraka ny teniny fa tsy ny an’ny ray aman-dreniny. Mety tsy hifanaraka amin’ny havam-badiny koa ilay lehilahy na ilay vehivavy, ka hampisy olana izany.
5 Faly sahirana koa matetika ny mpivady rehefa fantatr’izy ireo fa bevohoka ilay vehivavy. Lasa manahy mantsy izy ireo hoe ho salama tsara ve ilay reny sy ilay zaza ao an-kibony. Fantany koa fa ho betsaka kokoa ny vola hilainy. Tsy vitan’izany fa hiova ny fiainan’izy ireo rehefa ho teraka ilay zaza. Mety ho variana amin’ilay zaza ilay reny, ka tsy dia ho afaka hiaraka hoatran’ny taloha intsony izy mivady. Mety hahatsiaro ho tsy raharahaina àry ilay lehilahy. Hitombo koa ny andraikiny, satria hiampy iray ny olona mila velominy sy karakarainy.
6-8. Inona no mety ho tsapan’ny mpivady raha tsy mety manan-janaka izy ireo?
6 Manana olana hafa mihitsy ny mpivady sasany. Te hanan-janaka mafy ry zareo, saingy indrisy fa tsy mety manana. Mety halahelo be ilay vehivavy rehefa tsy mety bevohoka. Tsy hoe rehefa manambady na manan-janaka ny olona, dia azo antoka hoe tsy hisy zavatra hampanahy azy. Mety ho lasa ‘fahoriana amin’ny nofo’ anefa ny faniriana hanan-janaka raha tsy mety tanteraka. (Ohab. 13:12) Nahamenatra taloha izany hoe tsy miteraka izany. Kivy be, ohatra, i Rahely vadin’i Jakoba satria izy tsy niteraka, nefa ny rahavaviny nanan-janaka maro. (Gen. 30:1, 2) Heverina ho tena tsara ny hoe maro anaka any amin’ny tany sasany, ka matetika ny misionera any no anontanian’ny olona hoe fa maninona izy ireo no tsy miteraka. Na efa hazavain’izy ireo tsara aza ny antony, dia mbola misy milaza ihany hoe: “Miteraha amin’izay fa sao dia tara loatra e!”
7 Te hanan-janaka mafy ny anabavy iray any Angletera, saingy tsy nety nanana mihitsy. Nihanandroso taona anefa izy, dia tonga saina hoe tsy ho afaka hanan-janaka intsony eto amin’ity tontolo ity. Kivy tanteraka izy tamin’izay. Nanapa-kevitra àry izy sy ny vadiny hoe hanangan-janaka. Mbola nalahelo be ihany anefa izy. Hoy izy: “Efa fantatro hoe hafa mihitsy ny hoe ianao no niteraka an’ilay zaza sy ny hoe zaza natsanganao izy.”
8 Milaza ny Baiboly fa mety ho voaro ny vehivavy sasany raha miteraka. (1 Tim. 2:15) Tsy midika akory izany hoe rehefa miteraka na manan-janaka ny olona iray, dia hiaina mandrakizay. Inona àry no tian’io andininy io holazaina? Variana mikarakara ny zanany sy ny tokantranony matetika ny reny. Mety hanampy azy izany mba tsy ho zatra hifosafosa na hidikiditra amin’ny fiainan’olona. (1 Tim. 5:13) Mety mbola hanana olana ihany anefa izy ao an-tokantranony.
Inona no hampahery ny olona maty vady? (Fehintsoratra 9, 12)
9. Inona koa ny ‘fahoriana amin’ny nofo’ mety hanjo ny olona manambady?
9 Misy ‘fahoriana amin’ny nofo’ manjo ny mpivady mety tsy ho tonga ao an-tsaintsika avy hatrany: Mety ho faty ny iray amin’izy ireo. Maro no tsy nanampo hoe ho faty ny vady malalany, nefa tsy maintsy niaritra an’izany. Tena mino anefa ny Kristianina hoe hatsangana ny maty. Izany mantsy no nampanantenain’i Jesosy. (Jaona 5:28, 29) Azo antoka fa tena mampahery an’ireo maty vady izany. Anisan’ny fomba ampaherezan’i Jehovah an’ireo mandia fahoriana ny fampanantenana ao amin’ny Teniny. Hojerentsika izao hoe ahoana no nahazoan’ny mpanompony sasany fampaherezana avy aminy, ary inona no vokatr’izany tamin’izy ireo.
INONA NO HAMPAHERY ANTSIKA REHEFA MISY OLANA?
10. Inona no nampahery an’i Hana? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
10 Diniho izay nanjo an’i Hana, vady malalan’i Elkana. Tsy niteraka izy. I Penina rafivaviny anefa nanan-janaka maromaro. (Vakio ny 1 Samoela 1:4-7.) Nanorisory an’i Hana foana i Penina “isan-taona”, ka kivy sy nalahelo be izy. Inona no nampahery azy? “Naharitra nivavaka teo anatrehan’i Jehovah izy.” Nanantena ve izy hoe hamaly ny vavaka nataony i Jehovah? Azo antoka izany matoa “hita tamin’ny endriny fa tsy niady saina intsony izy.” (1 Sam. 1:12, 17, 18) Natoky izy hoe homen’i Jehovah zanaka lahy na zavatra hafa hanampy azy tsy halahelo be intsony.
11. Inona no tokony hataontsika rehefa mivavaka, raha te hahavita hiatrika olana isika?
11 Hisy foana ny olana raha mbola tsy lavorary isika ary raha mbola eto amin’ity tontolon’i Satana ity. (1 Jaona 5:19) Soa ihany anefa fa azontsika atao ny mivavaka amin’i Jehovah, ilay “Andriamanitry ny fampiononana rehetra.” Afaka manampy antsika hiatrika ny olana sy ny fahoriana mahazo antsika izany. Tsy ampy anefa ny hoe miresaka an’ilay olana amin’i Jehovah. Tokony hamboraka ny ao am-pontsika aminy isika, toy ny nataon’i Hana. Mila mitalaho aminy isika, izany hoe miangavy azy fatratra, ka lazaintsika aminy izay tena ao am-pontsika.—Fil. 4:6, 7.
12. Inona no nanampy an’i Ana ho faly foana na dia niatrika olana aza izy?
12 Mety halahelo be ianao na hahatsiaro hoe misy zavatra tsy ampy eo amin’ny fiainanao, satria tsy manan-janaka ianao na maty vady. Misy zavatra afaka mampahery anao anefa. Maty, ohatra, ny vadin’i Ana, mpaminanivavy tamin’ny andron’i Jesosy, nefa vao fito taona izy ireo no nivady. Tsy nanan-janaka angamba ry zareo matoa tsy miresaka an’izany ny Baiboly. Inona no nanampy an’i Ana? ‘Tonga tsy tapaka tao amin’ny tempoly izy’, na dia tamin’izy efa 84 taona aza. “Nanao fanompoana masina” tao izy andro aman’alina, “sady nifady hanina no nitalaho tamim-bavaka.” (Lioka 2:37) Nampahery azy sy nanampy azy ho faly foana ny fanompoana an’i Jehovah.
13. Milazà ohatra mampiseho hoe afaka mampahery antsika ny namana, rehefa tsy manao izany ny havantsika.
13 Hana-namana isika raha miaraka tsara amin’ireo mpiara-manompo amintsika. (Ohab. 18:24) Tsy nanompo an’i Jehovah intsony, ohatra, ny maman’i Paula, tamin’i Paula dimy taona. Nalahelo be i Paula, ary tena mafy taminy ilay izy. Nisy mpisava lalana atao hoe Ann anefa nampahery be azy ary nampianatra Baiboly azy. Hoy izy: “Tsy mpihavana izahay sy Ann, nefa tena nanampy ahy ny zavatra nataony tamiko. Nanampy ahy tsy hiala tamin’i Jehovah izany.” Mbola manompo an’i Jehovah foana i Paula. Faly izy fa mifandray amin’ny fiangonana indray izao ny reniny, dia afaka miara-manompo an’i Jehovah indray izy mianaka. Faly koa i Ann satria afaka nanampy an’i Paula tsy hivadika tamin’i Jehovah.
14. Inona no fitahiana ho azontsika raha mampahery ny hafa isika?
14 Hadinontsika matetika ny olana mahazo antsika, rehefa mazoto manao zavatra tsara ho an’ny hafa isika. Maro ny anabavy manambady na tsy manambady mahatsapa fa falifaly izy ireo rehefa mitory ny vaovao tsara. Manao ny sitrapon’i Jehovah mantsy izy ireo amin’izany ka manome voninahitra azy, ary faly miara-miasa aminy. Misy aza milaza hoe manasitrana azy ny fanompoana. Isika rehetra mihitsy anefa no afaka mitady izay hahasoa ny hafa ka mitory aminy ny vaovao tsara. Raha miezaka manao zavatra tsara ho an’ny mpiara-manompo koa isika, dia hifankatia kokoa. (Fil. 2:4) Modely ho antsika ny apostoly Paoly. Nikarakara tsara ny fiangonana tao Tesalonika izy, toy ny “reny mampinono” mikarakara ny zanany. Nampionona sy nampahery azy ireo koa izy, toy ny ataon’ny ray amin’ny zanany.—Vakio ny 1 Tesalonianina 2:7, 11, 12.
AMPAHEREZO NY FIANAKAVIANAO
15. Iza no tena tokony hampianatra Baiboly ny ankizy?
15 Ary ahoana indray no ampaherezana an’ireo fianakaviana eo anivon’ny fiangonana? Iangavian’ireo vaovao isika indraindray mba hanampy azy hampianatra Baiboly ny zanany. Mety ho isika mihitsy aza no asainy hampianatra azy. Raha ny Soratra Masina aloha no jerena, dia ny ray aman-dreny no tena tokony hampianatra sy hampiofana ny zanany. (Ohab. 23:22; Efes. 6:1-4) Marina fa mila fanampiana izy ireo indraindray, ary tena faly rehefa manampy azy isika. Andraikitr’izy ireo anefa ny mampianatra ny zanany. Mila mifampiresaka matetika amin’ny zanany koa izy ireo.
16. Inona no tokony hotadidinao raha asaina manampy zanak’olona ianao?
16 Raha misy ray aman-dreny mangataka anao hampianatra Baiboly ny zanany, dia tokony hotadidinao fa tsy hoe lasa solon’ny ray aman-dreniny ianao. Mety ho tsy Vavolombelona koa ny ray aman-drenin’ilay ankizy. Tsara kokoa àry raha any an-tranon-dry zareo izy no ampianarina rehefa ao ny ray aman-dreniny, na tokony hisy Vavolombelona matotra hafa hanatrika eo. Raha tsy mety izany, dia ataovy any amin’ny toerana talaky maso ilay fianarana, fa tsy any amin’ny toerana tsy hitan’iza na iza. Amin’izay dia tsy hisy olona hiahiahy ny zavatra ataonao. Antenaina fa mbola hampianatra Baiboly an’ilay ankizy ny ray aman-dreniny any aoriana any, satria andraikitra nomen’Andriamanitra azy izany.
17. Inona no azon’ny ankizy atao mba hampaherezana ny fianakaviany?
17 Afaka mampahery sy mampionona ny fianakaviany ny tanora tia an’i Jehovah sy manaraka ny toroheviny. Ahoana no anaovany an’izany? Mila manaja ny ray aman-dreniny izy, manampy azy amin’ny raharaha sy ny vola lany ao an-trano, ary miezaka ny tsy hivadika amin’i Jehovah. Nanompo an’i Jehovah i Lameka, taranak’i Seta, talohan’ny Safodrano. Nino izy hoe hitondra fampiononana i Noa zanany lahy. Hoy àry izy: “Izy no hitondra fampiononana ho antsika. Ilaintsika mantsy izany satria miasa mafy sy misasatra isika noho ny nanozonan’i Jehovah ny tany.” Tanteraka izany taorian’ny Safodrano, rehefa tsy voaozona intsony ny tany. (Gen. 5:29; 8:21) Afaka mampahery ny fianakaviany toy izany koa ny ankizy rehefa tsy mivadika. Afaka manampy azy ireo hiaritra izy dieny izao, ary manampy azy ireo ho tafavoaka velona amin’ilay loza lehibe noho ny Safodrano.
18. Inona no manampy antsika hiaritra, na inona na inona olana mahazo antsika?
18 An-tapitrisany no tsy kivy be na dia manana olana isan-karazany aza. Mampahery azy ireo ny mivavaka sy ny misaintsaina ny modely nomen’ireo olona resahin’ny Baiboly ary ny mifandray akaiky amin’ny vahoakan’i Jehovah. (Vakio ny Salamo 145:18, 19.) Fantatsika fa tena afaka mampionona sy mampahery antsika foana i Jehovah. Vonona hiatrika an’izay fahoriana na olana mety hitranga àry isika, dieny izao sy amin’ny hoavy.